Shijiazhuang Tianqiao Welding Materials Co., Ltd dia naorina tamin'ny 2007 izay 30 kilometatra atsimo andrefan'ny shijiazhuang. Ny fivezivezena ataon'ny orinasanay dia tena mety amin'ny 20 kilometatra fotsiny andrefan'ny làlam-pirenena 107, akaikin'ny lalambe Shixing sy Jingzan ihany koa. Manana hery ara-teknika matanjaka izahay, fitaovana fitiliana vokatra tanteraka hahafahanay mitazona ny kalitaon'ny vokatra azo antoka. Ny orinasanay dia misy departemanta famokarana, sampana teknika, departemanta R&D, QC & Laboratoara, departemanta fivarotana, departemanta lojika. Nandalo ny fankatoavana rafitra fitantanana kalitao ISO9001: 2008 ihany koa izahay.
Ny vokatray dia misy karazana electrode welding miaraka amin'ny marika "Yuanqiao", "Changshan", toy ny vy ambany karbaona, vy Iow alIoy, vy mahazaka hafanana, vy maripana ambany, vy tsy misy fangarony, vy vy, elektrôka fanamafisam-peo mivaingana. Ny karazana fluff rehetra miovaova sy ny karazana tariby welding ary ny vovoka mifangaro samihafa. Ny vokatray dia manana fahombiazana tena tsara, kalitao miorina, famolavolana fantsom-boho tsara, fanesorana ny silaka tsara, fahaiza-manao tsara hanoherana ny harafesina, Stomata sy triatra, fampisehoana mekanika metaly metaly tsara sy tsy miovaova. fanesorana, fahaiza-manao tsara hanoherana ny harafesina, Stomata ary ny triatra, ny fahombiazan'ny mekanika metaly napetraka tsara sy milamina.
Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny toekarena NationaI isan-karazany, toy ny milina, metallurgy, indostria simika solika, boiler, sambo fanerena, ny sambo, ny tranobe, ny tetezana, sns., Amidy manerana ny firenena ny vokatra, ary tsara voarain'ireo mpampiasa midadasika.
Ny vokatray dia zato isan-jato noondrana ary efa amidy iraisan'ny firenena, any Etazonia, Eropa, Amerika atsimo, aostralia, afrika atsinanana, atsinanana atsimo atsinanana ary sns. .
Eo ambanin'ny fanahin'ny "kalitao faratampony, fahamarinana, fiaraha-miasa mandresy", izahay dia vonona ny hahatanteraka ny fampandrosoana iraisana ary hamorona famirapiratana amin'ny mpanjifa rehetra. Manantena ny hisitraka ny tombontsoa manokana, ny fifandraisana maharitra sy maharitra amin'ny mpanjifa sy ny mpaninjara manerana an'izao tontolo izao. Mino izahay fa afaka mahatratra ny ho avy mahafinaritra amin'ny alàlan'ny ezaka ataontsika.
Ss Welding Electrode, Tsorakazo vy tsy mitovy, Atsofohy vy vy vy, Kavina vy 1.5 Mm, vy vy, electrode welding,